Kufungisisa uye mushonga muna 2021: kurumbidza kwekutarisira?
Yakatumirwa ne Tranquillus | Jan 12, 2022 | Pamusoro pewebhu
Sevadzidzi vezvokurapa, takasangana nekufungisisa kwepfungwa senzira yekunzwa, chinguva pachedu, kufema, nzira yekuzvichengeta, kutarisira vamwe zvirinani. Kubatwa nehupenyu, rufu, munhu, kusasimba, kupokana, kutya, kukundikana…Nhasi vakadzi, vanachiremba, tazvipfuudza kuvadzidzi kuburikidza nekudzidzisa.
Nekuti mushonga uri kuchinja, vadzidzi vanhasi vanove vanachiremba vamangwana. Nekuti kukudziridza pfungwa yekuzvitarisira iwe, vamwe uye nenyika kwakakosha, iyo fakisi inozvibvunza pachayo.
Mune iyi MOOC, iwe unowana iyi nzira kubva mukutarisira kuenda kune kufungisisa, kana kubva pakufungisisa kuenda kune hanya, zvichibva pane ruzivo rwevadzidzi vekurapa.
Nokudaro, tichaongorora chikamu mushure mechikamu
Nzira yekuzvichengeta sei kuti utarisire vamwe panguva iyo hutano hwepfungwa hwevanochengeta huri kurwiswa uye chirongwa chechipatara chinozununguswa?
Nzira yekubva sei kubva kune tsika yebhanhire kune tsika yekuchengetedza iyo inotarisira zvipenyu zvehupenyu?
Nzira yekusimudzira sei pfungwa yekutarisira, kunyanya mumishonga, mumwe nomumwe uye pamwe chete?
Kufungisisa uye mushonga muna 2021: kurumbidza kwekutarisira? January 17th, 2022Tranquillus
VERENGA Nhanganyaya kune Statistics naR
pashureDzidza kudzidzisa Digital uye Computer Science
zvinoteveraShandisa CCI zvakanaka mune email
Izvo zvekutanga zveAptlook pawebhu
Kudzidza kusati kwagadziriswa kwemamiriro ebasa
Wedzera kushanda zvakanaka ne5S
Kutumirwa kwenzvimbo kweFrance Relance: kuchinjika kwehunyanzvi hwenharaunda nzvimbo dzekudyara pacts